महँगो कलमले राम्रो साहित्य लेख्छ र !- सुदिप आचार्य - MeroReport
महँगो कलमले राम्रो साहित्य लेख्छ र !- सुदिप आचार्य
सुदिप आचार्य पेशाले मेडिकल डाक्टर हुन् । तर उनको ब्लग हेर्दा उनी डाक्टर हैन Nature Photographer हुनुपर्ने झैँ लाग्छ । सुदिपको 'पेशा' र 'प्यासन' हेर्दा चर्चित हिन्दी सिनेमा 'थ्रि इडियट्स'को एक पात्र 'फरहान'संग तुलना गर्दा पनि फरक पर्दैन किनकी फरहानको भित्री इच्छा वाइल्डलाइफ फोटोग्राफीतिर थियो भने उ इन्जिनियरको बिद्यार्थी थियो । प्रकृति र जनजीवन जोड्ने सुन्दर तस्विरहरु सुदिपको ब्लग http://nepalsnapshots.blogspot.com/ मा हेर्न सकिन्छ । 'पेशागत जिम्मेवारीबाट फुर्सद निस्किने बित्तिकै सुदिप क्यामेरा र टेण्ट बोकेर तस्विर खिच्न गैहाल्छ' उनीसंग परिचितहरु यसै भन्छन् । मेरोरिपोर्टको 'साताका ब्लगर' स्तम्भमा यस पटक हामीले उनै सुदिपसंग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ प्रश्नहरुको सटिक जवाफ दिन खप्पिस सुदिपसंग प्रकाश लामिछानेले गरेको कुराकानी:
ब्यक्तिगत प्रसंगबाटै कुराकानी सुरु गरौँ, तपाइको एकदिन कसरी बित्छ? बताइदिनुस न ।
बिहानीपख खुब मिठो निन्द्रा लाग्छ तर काममा जानुको हतारोबाट दिन सुरु हुन्छ । अनि सारा दिन कामलाई नै दिनुपर्छ । यसो फुर्सद पाए सामाजिक संजालहरुमा रमाउने, फोटो खिच्ने या यस्तै अरु केहि गरिन्छ ।
ब्लगिङ कहिलेदेखि शुरू गर्नुभयो?
२ बर्ष पनि नाघेछ है पत्तै नपाई ।
ब्लगिङ केका लागि?
मैलेमात्र राम्रो हेर्नु पर्छ भन्ने छ र? आफुले देखेको अरुलाइ पनि देखाउनका लागि ।
तपाइको हेर्दा पुर्णरुपमा फोटो ब्लग झैँ लाग्यो । खासगरी कस्ता कुराहरू पोष्ट गर्न रुचाउनुहुन्छ?
नेपाल, नेपाली र यहाँको सुन्दरता, अँझ स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा प्राकृतिक सुन्दरता।
एउटा बिशुद्द मेडिकल डाक्टरलाइ ब्लगिङले कसरी लोभ्यायो, त्यो पनि नेपालमा दुर्लभै गरिने फोटो ब्लगिङ?
खासमा मलाइ ब्लगिङ गर्न उक्साएको @chalise86 ले हो । त्यसका साथै मलाई देख्न मन लाग्छ, घुम्छु: त्यसले फोटो खिच्न लोभ्यायो । मैले जे देख्छु त्यो अरु सबले किन नहेर्ने त? खास त्यसरी नै हो ।
सोसल मिडियामा आफुलाइ कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ एउटा डाक्टरका रुपमा या फोटो ब्लगरका रुपमा?
मात्र नेपाल सुन्दर छ भन्ने कुरा बिश्बास गर्ने एउटा नेपाली, ब्लगमा पेशाभन्दा बाहिरको 'म' ।
गर्नुहुन्छ फोटोब्लगिङ, पेशा हो मेडिकल डाक्टरको, तर सोसल नेटवर्किङ साइटहरु खासगरी फेसबुक र ट्विटरमा हुने प्राय: बहसहरुमा समेत सहभागी भइरहनुहुन्छ, नेपालको सोसल नेटवर्किङ साइटमा हुने गफगाफको कल्चर र ब्लगिङलाइ कसरी नियाल्नुभएको छ?
राम्रो अभ्यास भैरहेको छ । जान्न र बुझ्न पाइने सजिलो माध्यम हो ब्लग अनि सोसल नेटवर्किङ साइटहरु पनि । अँझै स्पष्ट रुपमा भन्दा बिभिन्न बिचारहरु जोड्ने पुल भन्न ठिक होला ।
धेरै पटक धेरै अनुभब धेरै मिठा सारै थोरै नमिठा । सबैभन्दा बिना लज्जाबोध गल्ति सुधार्ने मौका पाएका क्षणहरु, यही नै हो ।
फोटो खिच्नु पुर्णत: प्राविधिक कुराझैँ लाग्छ, क्यामेरा अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्दा । तर सबै क्यामेरापर्सनले लोभलाग्दा तस्विर खिच्न सक्दैनन् । फोटोग्राफी बढी के हो? सिर्जनशिलता या प्राविधिक दक्षता?
एउटा भनाइ पनि छ नि, 'a picture speaks more thanathousand words' भन्ने ।
फोटो ब्लगरका नाताले यो भनाइलाइ कसरी पुष्टी गर्न चाहनुहुन्छ?
हो, चित्रले बोल्ने मात्र होईन-चिच्याउँछ, घचघच्याउँछ । मात्र सुन्ने कान र देख्ने आँखा हुनुपर्छ ।
ब्लगिङ र सोसल नेटवर्किङ साइट मार्फत मानिसहरु आफ्ना अभिब्यक्ति अरुमाझ पुर्याइरहेका हुन्छन्, चाहे त्यो कलासाहित्य होस या सुचना, समाचार र बिचार मार्फत होस् । तपाइले आफ्ना तस्विर मार्फत के कुरा अभिब्यक्त गरिरहनुहुन्छ?
तिम्रा वरिपरिका अथाह सुन्दरता, मुस्काउने बहाना र आहा नेपाल भन्ने अबसर ।
हामीकहाँ इन्टरनेट प्लेटफर्ममा राखिएका सामग्रीहरुको सबै भन्दा ठुलो समस्या कपिराइट र पाइरेसीको हो । तपाइका तस्विरहरु चोरी भएका त छैनन?
खै ! अहिलेसम्म त थाहा पाएको छैन ।
Vintage car को रहेछ
नेपालमा फोटोब्लगहरु अत्यन्तै न्युन भेटिन्छन किन यस्तो होला क्यामेरा महँगो साधन भएर या फोटो ब्लग पनि हुन्छन भन्ने बुझाइ कम भएर?
होइन, यो ईच्छा हो, passion हो । क्यामराले त जे भन्यो त्यहि गर्छ । महँगो क्यामरा हुदैमा फोटो राम्रो हुदैन । sensor राम्रो हूँदैमा फोटो कहाँ राम्रो हुन्छ र…..।
त्यसोभए राम्रो फोटो खिच्नलाइ क्यामेरा राम्रो चाँहिदैन, कन्सेप्ट राम्रो भए हुन्छ भन्ने भनाइ यहाँको?
महँगो कलमले राम्रो साहित्य लेख्छ र !
सोसल मिडियामा आजभोलि भइरहेका बहसले नयाँ के गरिरहेको जस्तो लाग्छ यहाँलाइ?
बेस बस्दै छ । मान्छेले धैर्यतापुर्वक अरुको कुरा सुन्नु, थाहा पाऊनु र बुझ्नु पनि बहसको स्तर स्वत: माथि जानु हो जस्तो लाग्छ मलाइ त ।
धेरै कुरामा भर पर्छ । Presentation र बिज्ञापन मुख्य हुन् ।
तपाइ आफुचाँही अरुको ब्लग कत्तिको हेर्नुहुन्छ?
हेर्छु नि धेरै हेर्छु । मेरा सर्कलका सबैको हेर्छु । धेरै नै छन्, केहिले रुवाए, केहीले हँसाए र केहीले सिकाए पनि । नामै लिने हो भने लामै लिस्ट हुन्छ । नेपालका ब्लगहरु भ्याएसम्म र इन्टरनेटले साथ दिएसम्म छुटाउँदिन ।
यति कुरा गरिसकेपछि सामाजिक संजालको खास महत्व चाँहि के त?
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता । साथै सामाजिक संजाल जसले जसरि पनि लिन सक्ने platform हो, यसलाई म अत्यन्त उपयोग पनि गर्छु ।
ब्लगिङ्लाइ ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता पनि चाहिन्छ भन्ने बहस पनि छ एकातिर। तपाइलाइ के लाग्छ, के यो जरूरी छ?
आचारसंहिता अर्काले बनाइदिने कुरो हो र ! यो त मनैदेखि आउनुपर्छ ।
मलाई केहि राम्रा खिच्नका लागि “ब्लगर अफ द विक” बनाएर दबाब दिए जस्तै म भन्दा राम्रा लेख्नेलाई पनि यसैगरी दबाब दिनुपर्यो, त्यो पनि निरन्तर । धन्यवाद् ।
Comment by Lava Kafle on January 18, 2013 at 2:45pm
Comment by Amuna Chapagain on January 16, 2013 at 3:29pm
Congratulations Sudip jee.......!!!!!
Comment by Kranti Darai on January 16, 2013 at 10:59am
Congratulations Sudip jee :)
Comment by Prakash Lamichhane on January 16, 2013 at 10:53am
बधाइ छ सुदिप डार्सापलाइ । :)